1. International ama ika ewepụghị ire ọkụ, ugboro ntughari combustion technology, kacha nso nke ire ọkụ radieshon, iji hụ na zuru combustion, melite thermal arụmọrụ, site combustion wepụ oxygen na ọkụ, iji belata ọkụ ọnụego;
3. Kpọmkwem tụọ okpomọkụ nke mmiri mmiri aluminom, njikwa okpomọkụ okpukpu abụọ, njikwa okpomọkụ ziri ezi nke mmiri mmiri aluminum, ọdịiche okpomọkụ nke mmiri mmiri aluminum ≤ ± 2 ° C;
4. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ahọrọ ihe ndị dị elu na-ebubata, ntinye ntinye, ndụ ọrụ nke ihe karịrị afọ ise, ọ dịghị aluminum, ọ dịghị ọnwụ ọnwụ, enweghị ígwè proliferation;
6. Na-anabata ihe nano-adiabatic, mmetụta nchekwa okpomọkụ dị mma, ịrị elu okpomọkụ nke mgbidi ọkụ na-erughị 30 Celsius;
7. Furnace cover pneumatic lift, adaba slag ihicha na mmezi, elu ogo nke akpaaka.
Gịnị bụ aluminom oven?
A na-atụle ọkụ ọkụ anyị na-enye maka ijide na nchekwa nke ọla a wụrụ awụ. Ọ dabara adaba maka ibuga n'etiti aluminom a wụrụ awụ na-arụ ọrụ. ... A na-eji ọkụ ọkụ ndị a na-ejide ma na-echekwa ọla a wụrụ awụ na okpomọkụ dị n'ime ebe a na-ekpo ọkụ.
Kedu ka ọkụ induction si arụ ọrụ?
N'ime ọkụ induction, a na-agbaze ma ọ bụ na-ekpo ọkụ n'ihe igwe na-anakọta ihe site na ikuku electromagnetic na-emepụta ugbu a. ... A na-ekpebi ọnụọgụ nke na-akpali akpali site na nha ọkụ ọkụ, ike na-etinye n'ime ígwè ahụ, ugboro ole nke oghere electromagnetic na ụdị / ọnụ ọgụgụ nke ígwè na ọkụ ọkụ.
Nke gara aga: QGQR Gas Crucible Tilting Furnace
Osote: CTM Series aluminum alloy agbaze na ijide ọkụ (igwe-n'akụkụ ọkụ)
Ndepụta nkọwapụta ọkụ ọkụ LQB gas na-ekpo ọkụ aluminom na-ejide ọkụ
Nlereanya Njide ike Nkezi oriri gas Ogologo Obosara Elu nke ntinye ofe
n'arọ Nm3/h mm mm mm